OEM सेवा - ज़ुझाउ रक अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
त्यसबेलादेखि हाम्रो समूह OEM काठ प्यानल five० भन्दा बढी देशहरूमा पाँच महादेशमा।
ROC OEM लक प्यानल उत्पादनहरू सँधै फैशनको चलन समात्न र अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि हिंड्न सक्दछ भनेर सुनिश्चित गर्न। हामीले १२ वटा ईन्जिनियरहरूको साथ एउटा आर एण्ड डी सेन्टर स्थापना गर्‍यौं जुन हाम्रो ग्राहकलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न र हाम्रो प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन इच्छुक काठको प्यानल डिजाइन गर्दछ। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको इन्टर्प्राइज ब्रान्ड छवि सुधार गर्न, ब्रान्डको मान बढाउन, र विकास LT छोटो बनाउन, उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी एक स्टप OEM / ODM सेवा प्रदान गर्न सक्दछौं। बितेको years बर्षमा, महान टीमले ठूलो सफलता ल्यायो। धेरै केसहरू ग्राहकहरूले स्वीकार गरे र उनीहरूलाई अधिक बजार सेयर कब्जा गर्न मद्दत गरे।
हामीसँग प्लाइवुड कारखाना / OSB कारखाना / MDF कारखाना र LVL उत्पादन कारखाना, टुलिing्ग फैक्ट्रीमा ग्राहकको आवश्यक OEM उत्पादन पूरा गर्न हामीसँग हाम्रो आफ्नै अधिकार छ। मासिक उत्पादन 70000CBM (PLYWOOD, OSB र MDF आदि) सम्म।
हामीसँग आन्तरिक कच्चा माल निरीक्षण, उत्पादन अनुगमन र पूर्व शिपमेन्ट निरीक्षणमा कडा आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रिया छ। यो सुनिश्चित गर्नको लागि हो कि हाम्रा उत्पादनहरूले ग्राहकको आवश्यक अनुमानहरू पूरा गर्न सक्दछन् र तपाईंको OEM उत्पादनहरू गुणवत्तामा बढी विश्वसनीय छन्। हाम्रो कारखानाले ISO9001 पार गर्यो र हाम्रा उत्पादनहरूले सीई, एफएससी, जास-एएनजेड ， पीईएफसी, बीएस आदि प्रमाणपत्रहरू पाए। हामी केवल राम्रो गुणको साथ विश्वास गर्छौं भने हामी हाम्रा ग्राहकहरूबाट विश्वास जित्न सक्छौं।
निर्यात वर्ष बर्षको अनुभव संग, हामी हाम्रो ग्राहकको ढुवानी को समय डेलिभरी सुनिश्चित गर्न सीमा शुल्क घोषणा प्रक्रिया सहज र समयमै स्थानीय यातायात व्यवस्था गर्न सक्दछौं। हामी सबै विश्वास गर्छौं कि आजको दिनमा हाम्रो ग्राहकहरूको विश्वास जित्न सब भन्दा राम्रो सेवा नै सबैभन्दा आयात कारक हो।
गुणवत्ता प्लाइवुड, OSB र MDF को साथ तपाईंको नयाँ व्यवसाय सुरू गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईंको OEM / ODM उत्पादनहरू बनाउँनुहोस् र तपाईंको व्यावसायलाई बढावा दिनुहोस्। कृपया अब ROCPLEX सम्पर्क गर्नुहोस्।
ROCPLEX काठ प्यानल OEM / ODM को प्रक्रिया के हो?
१. आवश्यक विश्लेषण
विकासको पहिलो चरणको रूपमा, हाम्रो उत्पादन टोली आवश्यकता विश्लेषणमा संलग्न हुन इच्छुक छ। अमूर्त अवधारणाको साथ केही ग्राहकहरूको लागि, सुपरमार्केटमा प्रयोग गरिएको काठ प्यानल वा निर्माण साइटमा प्रयोगको लागि, हामी हाम्रो ईन्जिनियरि team टोली, मार्केटि team टोलीको व्यवस्था गर्नेछौं जसले उनीहरूको व्यावसायिक सल्लाह प्रदान गर्दछ कि उत्पादले बजारको अपेक्षाप्रति पूरा गर्दछ कि भनेर।
यस चरणमा हामी तपाईको काठ प्यानलको चाहिएको चरित्रको एक सूची बनाउँदछौं।
२. प्राविधिक समीक्षा
इच्छित चरित्रको असभ्य सूचीको साथ, हाम्रो उत्पादन टीम, खरीद विभागको साथ, हाम्रो सामग्री आपूर्तिकर्तासँग सञ्चार गर्दछ, घटकहरूको विस्तृत कन्फिगरेसन शीट बनाउन।
यस चरणमा हामी केही सम्भाव्यता वा लागत-दक्षताको मुद्दाको कारण चरण एकमा फिर्ता जान सक्छौं।
Cost. लागत र तालिका
अघिल्लो अनुसन्धानको आधारमा, ROCPLEX ले चार्ज फारम र समय तालिका प्रदान गर्न सक्दछ, जुन चाहिएको वर्ण, मात्रा र आपूर्ति श्रृंखला क्षमतामा धेरै भिन्न हुन्छ।
यस चरणमा, हामी औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्छौं।
S. नमूनाको विकास
ROCPLEX एउटा नमूना बनाउँदछ, भनिन्छ इन्जीनियरिंग नमूना, जुन सबै डिजाइन गरिएका पात्रहरू प्रशोधन गर्दछ। यो नमूना त्यसपछि उमाल्ने परीक्षण, स्थिरता परीक्षण, शक्ति परीक्षण र स्थायित्व परीक्षणको विषय हो।
हामी ग्राहकलाई तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान गर्न विकासमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्दछौं।
Test. परीक्षण आदेश
सन्तुष्ट ईन्जिनियरिंग नमूनाको साथ, हामी परीक्षण-उत्पादन चरणमा बढ्न सक्छौं। हामी ठूलो उत्पादन, आपूर्तिकर्ताको विश्वसनीयता र विशाल उत्पादन अनुसूचीको स्थिरतामा सम्भावित जोखिमको मूल्या assess्कन गर्दछौं।
Mass. ठूलो उत्पादन
सबै समस्याहरूको समाधान र जोखिम पत्ता लगाई हामी ठूलो उत्पादनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दछौं।